Tumira zvirimo mu iPhone yako kuPc kana Mac kuburikidza neAirPlay ne5KPlayer | IPhone nhau
Tumira zvirimo mu iPhone yako kuPc kana Mac kuburikidza neAirPlay ine 5KPlayer
Nekuda kweiyo AirPlay mashandiro, isu tinogona kutumira zviri nyore zvirimo zveedu iPhone, iPad kana iPod touch kukomputa yedu, stereo kana Apple TV pasina kushandisa chero tambo. Iyi protocol, yakagadzirwa naApple muna2010, inoshandisa netiweki yeWi-Fi iyo michina yacho miviri yakabatana kutumira zvemukati
Asi, kuti tishandise komputa yedu seyakagashira AirPlay, zvinodikanwa kushandisa chishandiso iyo inoshandura michina yedu kuita inoenderana mudziyo, mudziyo unozivikanwa needu iPhone, iPad kana iPod touch, nekuti zvikasadaro hatizokwanise.
1 Izvo AirPlay inotipa
2 Wedzera rutsigiro rwe AirPlay paPC kana Mac
3 Izvo 5KPlayer inotipa
4 Mashandiro anoita 5KPlayer
4.1 5KPlayer paMac
4.2 5KPlayer paWindows
Izvo AirPlay inotipa
Panyaya yeApple TV, semuma speaker anowirirana neiyi protocol (senge mugadziri Sonos), izvi zvinoenderana neiri protocol, saka hatifanirwe kuita zvachose chinhu kuti mudziyo wedu uzvizive. Panyaya yemakomputa, Apple haisati ichipa application yechinyakare iyo inoshandura matafura edu kana malaptop kuva anogamuchira anoenderana neiyi tekinoroji isu tinomanikidzwa kuenda kune wechitatu-bato kunyorera.
Dambudziko nderekuti muzviitiko zvakawanda, iwo mafomu anoshandura michina yedu kuita inogamuchira inoenderana neAirPlay vanobhadharwa senge AirServer (17 euros) kana Reflector (20 euros), kutumidza maficha anozivikanwa-uye akanakisa maficha avanotipa.
Asi kana zvido zvedu zvichibva paPC yedu kana Mac kuva AirPlay inoenderana mudziyo, tinogona kushandisa 5KPlayer. Ita AirPlay ine 5KPlayer Izvo zviri nyore sekuisa iyo application paPC kana Mac uye kugovana zvirimo kubva kuchinhu chedu.
Wedzera rutsigiro rwe AirPlay paPC kana Mac
5KPlayer ine simba mutambi wevhidhiyo, iyo isina chekutumira kuVLC. Asi pamusoro pekuve yakasimba vhidhiyo inoridza, inoshandura komputa yedu kuva AirPlay inogamuchira, kuitira kuti tikwanise kutumira mavhidhiyo kubva kuchinhu chedu kuenda kumidziyo yedu kuti zvinoratidzwa pane yakakura skrini.
Asi pamusoro pezvo, zvinotibvumidzawo dzokorora chidzitiro cheedu iPhone, iPad kana iPod touch, basa rinotibvumidza kunakidzwa nemitambo yedu yatinofarira pachiratidziri hombe kana kushandisa maspika emakomputa edu kuridza mimhanzi yedu yatinofarira.
Kana iwe uine Mac mini, semuenzaniso, yakabatana neterevhizheni yako, haugone kuishandisa chete kutamba raibhurari yemuvhi yauinayo pakombuta yako, asi unogona zvakare tumira zvirimo zvakanaka kubva kuchinhu chako chinotarisirwa neIOS, usingafanirwe kuteedzera zvirimo kare pakombuta.
Izvo 5KPlayer inotipa
Pamusoro pekuva sarudzo yemahara pamusika kuwedzera rutsigiro rweAirPlay pane PC kana Mac, zvakare iri vhidhiyo player inoenderana neese ega ega ega ega ega eodhiyo nemavhidhiyo mafomati aripo pamusika, kusanganisira 360, mavhidhiyo.
Zvinotitenderawo rekodha zvemukati zvemukati Yedu iPhone, iPad kana iPod touch tisingatombofanira kurwa ne QuickTime (native application yeMacOS inotipawo basa iri).
Bvisa odhiyo kubva pavhidhiyo kuenda MP3 / ACC fomati, Nderimwe remabasa aripo neichi chishandiso, rakanakira basa kana tisingakwanise kuwana kopi yemuviri yeaudio yekonsati asi isu tine rutsigiro rwemuviri muvhidhiyo, nekuti zvinotibvumidzawo kutamba maDVD
Chimwe chiitiko icho vashandisi vazhinji vanozokoshesa kugona kwachinoita tamba m3u zvinyorwa, tichidzivirira kuti isu tinofanirwa kubhadhara kune iyi mhando yekushandisa inowanikwa zvese mukati nekunze kweMac App Store.
Chiitiko icho icho chinotipawo isu, uye icho chisingawanzoitika mune iyi mhando yevhidhiyo yekutamba yekushandisa, iko mukana we gadzirisa mavhidhiyo. 5KPlayer inotibvumidza kucheka zviitiko, kuzvitenderedza, kuchinja kumhanya kwekumhanya, kugadzirisa iyo chena chiyero, gadzirisa odhiyo ...
Asi sarudzo dzakapihwa ne5KPlayer hadzigumira pano. Rimwe basa ratiri kupiwawo nechishandiso ichi mukana we download mavhidhiyo eYouTube uye nekushandura zvishandiso zvedu kuita server yeDLNA kuitira kuti chero chinhu chinowirirana mumba medu, ingave Smart TV, PlayStation 4 kana Xbox, inogona kutamba zvirimo zvatiri kugovana.
Mashandiro anoita 5KPlayer
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kutora iko kunyorera 5KPlayer kubva pawebhusaiti yavo. Kuti iyo AirPlay basa itange kushanda, nekukurumidza patinoiisa, tinofanira mhanyisa kekutanga.
Kana tangoisa, iko kunyorera ichagara ichimhanya kumashure pese patinopinda mukomputa yedu, kuti iyo AirPlay basa igare ichiwanikwa.
Kuti utarise kuti iko kushanda kuri kushanda paMac yedu, isu tinongofanirwa kutarisa kana iyo yepamusoro menyu bar iwe unowana iyo icon inomiririra iko kushanda (katatu nekatenderedzwa kwakatenderedza).
Kutumira zviri mukati medu iPhone, iPad kana iPod touch zviri nyore sekuwana pani yekudzora uye Dhinda uye ubatise bhatani re Screen Screen. Tevere, tinosarudza zita rekomputa (mune yangu Mac mini) uye mufananidzo wechishandiso chedu chinotungamirirwa neIOS ichatanga kuratidza pachiratidziri cheMac yedu.
Kutumira vhidhiyo kubva kune yedu iPhone, iPad kana iPod touch kana kutamba vhidhiyo kubva padandemutande rinotenderera paMac yedu, tinofanira tinya paAirPlay icon uye sarudza zita reMac yedu.
Kana isu tichida iyo AirPlay basa rega kuwanikwa kudzamara tavhurazve komputa yedu zvakare, isu tinongofanirwa tinya pane yekushandisa icon iri pane yepamusoro bhawa uye sarudza Buda 5KPlayer.
Kuti utarise kuti iko kushanda kuri kushanda, isu tinongofanirwa kubaya pamusoro pemuseve uri kumusoro kuruboshwe kweWindows wachi uye tarisa kuti iyo icon yekushandisa inoratidzwa pakati pezvishandiso zvakavhurwa kumashure.
Maitiro ekuratidza zvirimo mumudziyo wedu paPC zvakafanana nepaMac.Tinongofanirwa kuwana iyo yepaneru (nekutsvedza chidzitiro pasi), Dhinda uye ubatise bhatani re Screen Screen uye sarudza zita remudziyo uyo unotanga ne5KPlayer.
Asi kana isu tichingoda chete kutamba vhidhiyo kubva kune inoyerera vhidhiyo sevhisi, isu tinobaya pane iyo AirPlay bhatani uye sarudza chipfuro chakanangwa.
Nezve iyo AirPlay inoshanda paPC yedu ngazvishande kudzamara titangazve komputa yedu zvakare, isu tinongofanirwa tinya-kurudyi pane icon yekushandisa uye sarudza Siya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Tumira zvirimo mu iPhone yako kuPc kana Mac kuburikidza neAirPlay ine 5KPlayer
Apple inomira kusanganisira mahedhifoni muiyo iPhone bhokisi
OtterBox inogadziridza iyo Symmetry Series 360 kesi uye ikozvino inowirirana neiyo Pro Pro 2020